ရွှေမန်းသူ ရွှေမန်းသား... | Your Property Finder Company Ltd.
Exhibition By YPF 27,September 2019
🦚🦚🦚 ရန်ကုန်မြို့ ၏ အကောင်းဆုံး နှင့် စိတ်ချရဆုံး Condo Project များထဲမှ ရွှေမြန်မာတို့ ၏ လက်တလောလူကြိုက်အများဆုံး ဖြစ်နေသည့် Emerald Bay Project ကြီးကို မန်းသူ မန်းသားများအတွက် YPF မှ ယူဆောင်လာပြီဖြစ်ပါသည်။
🕊🕊🕊 ကျင်းပမည့်အစီအစဉ် 🕊🕊🕊
• အောက်တိုဘာလ(၆) ရက်နေ့(တနင်္ဂနွေနေ့ )
• နေ့ လည် ၁ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိ
• Hotel Mandalay
ပွဲရက်အတွင်း အခန်းအား Booking ပြုလုပ်ထားရုံဖြင့်
✅ ကျပ်သိန်း (၂၀၀) ကျော်မှ (၇၀၀) ကျော်အထိ သက်သာခွင့်
✅ အရစ်ကျ (၅) နှစ်အထိ ပေးသွင်းနိုင်ခြင်း။
• လစဉ်ငွေပေးသွင်းစရာမလိုဘဲ (၃)လ (၁)ကြိမ်သာ ပေးသွင်းနိုင်ခြင်း
✅ ဗလာမပါ လျပ်စစ်ပစ္စည်းများမဲဖောက်ပေးခြင်း
ဒါ့အပြင် ၀ယ်ယူထားသောအခန်းအား အငှားပြန်ရရန် (၃)နှစ် အာမခံ စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
🤩🤩🤩 Emerald Bay Project ကြီးအ ကြောင်း
Emerald Bay Project ကြီးသည် ရန်ကုန်မြို့ ၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ တည်ရှိလာတော့မည့် Project ကြီးဖြစ်ပြီး ဟောင်ကောင်မြို့ ကဲ့သို့လှပ သော မြစ်အလှရှုခင်းကို မိမိအခန်းမှ တ၀ကြီးကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည့် အလွန်ရှားပါးသော မြစ်ကမ်းဘေးအလှကို ရရှိမည့် Project ကြီးဖြစ်သည်။
♥️ သာလွန်ကောင်းမွန်သော အိမ်ယာစီမံကိန်း
♥️ ခေတ်မီနည်းပညာ အသုံးပြုမှု
♥️ တစ်နေရာတည်းတွင် ပြီးပြည့်စုံစွာ နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်း
♥️ အိမ်ယာဝန်းအတွင်း နှင့် အိမ်ခန်းတိုင်းတွင် အလိုလျောက် ရေသောက်သုံးစနစ် တပ်ဆင်ထားပြီး သောက်သုံးရေကို အဆင့် (၄)ဆင့်ထိ သန့် စင်ထားသည့် စနစ်
♥️ လှပသော ပန်းဥယျာဉ်ကြီး Royal Garden ပါဝင်ခြင်း
♥️ ကျယ်ဝန်းသော မြစ်ရှုခင်း
♥️ ဂက် (စ်) ငွေ့ စင်ဆာ alarm များ နေထိုင်မှုလုံခြုံစေရန် ထည့်သွင်းထားခြင်း
♥️5Stars ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ခေတ်မှီ လုံခြုံရေးစနစ်များပါဝင်ခြင်း
♥️ မူကြိုကျောင်း၊ City Mart၊ JCGV ရုပ်ရှင်ရုံ၊ လုံလောက်သော ကားပါကင်နှင့် အဆင့်မြင့် စေျးဝယ်စင်တာများပါ ထည့်သွင်းဆောက်လုပ်သွားမည့် Project ကြီးဖြစ်ပါသည်။
🦚 အကျယ်အ၀န်း 🦚
1537 ~ 1605 sqft � 3+1 Bedroom
900 ~ 1038 sqft �2Bedroom
527 ~ 580 sqft � 1 Bedroom အစရှိသဖြင့် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
🦚 ဈေးနှုန်း 🦚
1sqft လျင် USD 180 (discount များမပါသေး) မှ စတင်မည်ဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင် PROJECT ကြီးကို လေ့လာနိုင်ရန် ခမ်းနားလှပသော SHOW GALLERY ကြီး ကို ဆောက်လုပ်မည့် နေရာတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။
ပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် ယခုပဲစာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါ။
Henry - 09 77 0748583 /
Nick - 09 78 9926280/
Ivy - 09 77 4449429
LT2005006510: Landed house for rent in Tarmwe.
LT2005006504: 3BR nice penthouse unit for rent in Star CIty.
LT2005006538: 3BR mini condo for sale in Kamaryut
LT2006006548: Land for sale in Yankin
LT2006006546: Land for sale in Yankin
LT2006006545: Land and house for sale in Yankin